ठ्याक्कै एक महिनापछि आजकै दिन प्रियंका र आयुष्मानले बिहे गर्दै – Khabar Silo
ठ्याक्कै एक महिनापछि आजकै दिन प्रियंका र आयुष्मानले बिहे गर्दै
काठमाडौं, १७ माघ । गत वर्षदेखि चर्चाको बिषय बनेकी अभिनेत्री प्रियंका कार्की र अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीको विवाहको मिति यस वर्ष भने तय भएको छ ।
गत वर्ष नै इन्गेजमेन्ट गरेका यो जोडी फागुनको १७ गते वैवाहिक जीवनमा बाँधिने जनाइएको हो । प्रियंकाले केही दिन अगाडि ब्याचलर पार्टी थाइल्यान्ड मनाएकी थिइन् ।
अमिताभले मागे माफी
चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम ‘कौन बनेगा करोडपति’को ११ औं सिजन सुरू भइसकेको छ। यसै कार्यक्रमका दौरान अभिनेता अमिताभ बच्चनले एक सहभागीसँग माफी मागेका छन्।अमिताभले कार्यक्रमको विशेष शोमा आएका एक चिकित्सकसँग माफी मागेका हुन्। ‘कर्मवीर विशेष शो’नाम दिइएको सो कार्यक्रममा आएका ती चिकित्सकले अमिताभलाई ३५ वर्ष पुरानो किस्सा सुनाउँदा सो कुरा स्पष्ट सम्झन नसकेपछि माफी मागेका हुन्। […]
पल शाह भन्छन्, ‘अफर आए सिपोरासंग फिल्म खेल्न तयार छु’ (भिडियो)
काठमाडौं । नायीका आँचल र उदिप श्रेष्ठको विवाहमा जान नपाएका नायक पल शाहले पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमा उनीहरुलाई विवाहको शुभकामना दिएका छन् । उनले एक टेलिभिजन अन्तरवार्ताका क्रममा विवाहको शुभकामना दिएका छन् । विवाहमा जान नपाउनुको कारण र इन्टामा अनफलो गर्नुको कारण वारे स्पष्ट पार्दै पलले अफर आए सिपोरासंग अभिनय गर्न पनि इच्छुक रहेको बताएका […]
पूजालाई के को डर ?
पूजा शर्मालाई सफल नायिकाको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । स्टारडम भएकी नायिकामध्ये एक नायिका हुन्, पूजा । ‘प्रेम गीत’बाट चर्चामा आएकी पूजालाई ‘म यस्तो गीत गाउँछु, रामकहानी’ लगायतका चलचित्रले अझै उचाइमा पुर्याएका छन् । यसैले त उनलाई अहिले चलचित्रमा लिनका लागि निर्माताले राम्रै रकम खर्च समेत गर्ने गरेका छन् । कात्तिक ८ गतेबाट पूजा अभिनित नयाँ […]
पशुपतिनाथमा पर्यटक आकर्षित गर्न संगीत सन्ध्या शुरु
पाथिभरा माताको को दर्शन गरेर आजको राशिफल हेर्नुहोश : वि.सं.२०७६ साल माघ १८ गते । शनिबार । ईश्वी सन् २०२० फेब्रुवरी ०१ तारिख
मिठो मानेर खाने म:मको बारेमा यि ५ तथ्य थाहा पाएपछि तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ !
किम जोङ उनका भतिजा ‘सम्पर्कविहीन’
श्रीमान् ले धोका दिएपछि रातको १२ बजे नाबालक छोरा छोडेर म’र्न हिडेकी शर्मिला १ बर्षमै करोडपति, बिगत सम्झेर यसरी रोइन् (भिडियो हेर्नुस्)